BỤ ABONNE: Martin Vrijland
Iji nọgide na-akwado gị chọrọ ngwa ngwa. Site n'ịbanye na saịtị a ị na-akwado ọrụ Martin Vrijland na onyinye. Ọ bụrụ na ịchọrọ ka ọtụtụ nde mmadụ nwee ike ịgụ akụkọ dị iche iche banyere akụkọ ahụ kwa afọ, nkwado gị bụ nnọọ ihe a nabatara. Ọ bụ gị ka ị chọrọ inye onyinye. Site na ịghọ onye otu ị na - enyere m aka ịlanarị n'agbanyeghị mmegide ọ bụla m nwere.
Ndenye Akaụntụ Ọhụrụ
Banye iji megharia ma ọ bụ gbanwee otu nọ na ya.
Họrọ otu ọkwa gị
Inye onyinye n’otu oge - € 50,00 - enweghị njedebe
Onye so na otu - € 2,00 - 1 Ọnwa
Ị ghọọ onye òtù na inye onyinye 2 kwa ọnwa
Onye na-azụ ahịa kwa ọnwa - € 5,00 - 1 Ọnwa
Ị ghọọ onye òtù na inye onyinye 5 kwa ọnwa
Onye ọ bụla so na ọlaọcha - € 10,00 - 1 Ọnwa
Ị ghọọ onye òtù na inye onyinye 10 kwa ọnwa
Otu onye edozi ya - € 20,00 - 1 Ọnwa
Ị ghọọ onye òtù na inye onyinye 20 kwa ọnwa
Onye otu afọ - € 25,00 - enweghị njedebe
Ị ghọọ onye òtù na inye onyinye 25 kwa afọ
Onye na-azụ ahịa otu afọ - € 65,00 - enweghị njedebe
Ị ghọọ onye òtù na inye onyinye 65 kwa afọ
Onye òtù ọlụlụ nke oge - € 125,00 - enweghị njedebe
Ị ghọọ onye òtù na inye onyinye 125 kwa afọ
Onye na-edozi ya - € 250,00 - enweghị njedebe
Ị ghọọ onye òtù na inye onyinye 250 kwa afọ
Koodu Mwepu	- Kwụrụ - Ezighi
Họrọ usoro ịkwụ ụgwọ gị
PayPal	 Ebe E Si Nweta / Debit	 Debit collection (ikike site na iDEAL)
Ekwenyere m na iwu nzuzo
Nleta nile: 14.850.185
E meelarị ihe emere Akwadoro Akwụkwọ Nsọ, mana a na-arụkwa ọrụ na Quran
guppy op E meelarị ihe emere Akwadoro Akwụkwọ Nsọ, mana a na-arụkwa ọrụ na Quran
Martin Vrijland op E meelarị ihe emere Akwadoro Akwụkwọ Nsọ, mana a na-arụkwa ọrụ na Quran